Goobaha Khadka Tooska ah ee Awstaria - Koodhadhka Lacagta Khadka Tooska ah ee Khadka
(500 votes, celcelis ahaan, 5.00 out of 5)
Loading ... Khamaarista Austria waa sharci. Intaa waxaa sii dheer, sannado badan waxay ku khamaaraysay ilaha ugu muhiimsan ee dakhliga dalka. Dhammaan noocyada khamaarka ee Austria waxaa sameeya Wasaaradda Maaliyadda (Bundesministerium für Finanzen). Maanta, waxaa jira 12 casinos oo ku saleysan dhulka. Soo-booqdayaasha waxaa la siiyaa ciyaaro kala duwan, oo ay ku jiraan roulette, turub, blackjack, mashiinno naadi ah oo wata bakhaarro horusocod iyo madadaalo kale oo khamaar ah
Aasaaska ugu caansan ee khamaarka ee Austria waa Casino, oo ku yaal dhismaha hoteelka Grand Hotel de l'Europe. Hoteelka laftiisa waxaa la dhisay 1907, iyo guriga khamaarka markii laga furay dadweynaha tan iyo 1984 wuxuuna leeyahay bedkiisu yahay 600 mitir murabac. Maaddaama Awstaria tahay dalxiis caan ku ah dalxiisayaasha, casinos badankood waxaa laga dhisay meel u dhow hudheelada. Ogsoonow in guryaha ciyaaraha ee dalkan aysan shaqeyn saacad walba. Waxay u furan yihiin martida 18:00 ama 19:00.
Khamaarista online ee Austria
Khamaarka internetka ayaa taariikh dheer ku leh dalkan. Meelaha qaarkood khamaarka khadka tooska ah ee khadka tooska ah ee Austria ee Yurub ayaa ka mid ah kuwa ugu faa'iidada badan, in kasta oo xarumahoodu aysan ku oollin dhulka waddanka, sida Jasiiradaha Channel. Xusuusnow khadka tooska ah ee loo yaqaan 'Austrian online casino Bvin (Bwin), kaas oo shati ka haysta dalal badan oo adduunka ah.
Shuruucda khamaarka internetka ee Austria sidoo kale waxay kuu oggolaanayaan inaad siiso rukhsad shirkado kale oo ku yaal waddanka, ujeeddadeeduna tahay - bilaabidda xayeysiisyo cusub oo khamaar internet ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira hal shuruud - websaydhkan waxaa sameeya kaliya khamaarayaasha maxalliga ah. Isla mar ahaantaana ma jiraan wax xaddidan oo ku saabsan arrinta ciyaarta ee bogagga caalamiga ah, Awstaria iyo dadweynuhu waxay si xor ah u isticmaali karaan adeegyada bogagga shisheeyaha
List of Top 10 Austria Sites Casino Online
Boggaga internetka ee khadka tooska ah wuxuu aqbalaa ciyaartoyda Austria
Eeg liiska boggaga internetka ee casino ee aqbala ciyaartoy ka socota Austria, oo bixiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Halkan waxaad ka heli doontaa madadaalo ballaadhan oo ka bilaabanta mashiinnada ciyaarta ilaa ciyaaraha casino oo ka nool kuwa iibiya barnaamijyada caanka ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, iyo kuwo kale oo badan Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa dib u eegistayada boggaga internetka ee casino, si aad uga feejignaato dhiirrigelinta khadka tooska ah ee ugu fiican, gunnooyinka iyo xulashooyinka lacag bixinta ee ay heli karaan ciyaartoy ka socota Austria
Alps baraf leh, harooyin aan hagaagsaneyn iyo nacnac macaan mozartkugel oo wata marzipan - waxaas oo dhan iyo wax ka sii badanba waa astaamaha Austria. In dalkan CasinoToplists ay kula soo booqdaan maanta si loo helo casinos-ka ugu fiican iyo naadiyada ciyaaraha.
Qaar ka mid ah taariikhda iyo juqraafi ee Austria;
Austria - casinos iyo khamaarka dalkan:
Casinos dhulka ku salaysan waa la oggol yahay, waxay yihiin 12, waxaa sidoo kale jira maraakiib ku leh casinos ee guddiga;
Ka hor inta casin casinos shaqaale ajaanib ah ayaa xannibay hadda in la mamnuuco;
Waxaa jira shaqaale ku shaqeeya gawaarida online-ka ah.
Casinos ugu caansan dhulalka caanka ah ee Australiya;
Goobta Awstaria iyo asalka taariikheed ee kooban
Dowladda Federaalka iyo isla mar ahaantaana jamhuuriyadda baarlamaanka waa magaca rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Austria. Markii ugu horraysay ee la xuso waxay ka bilaabmaysaa sanadkii 996 AD ee Austria waxay ku taal bartamaha Yurub. Taariikhda wadanku waxay aad uguxirantahay gobolka federalka jarmalka ah ee Bavaria - kaliya sanadkii 1156, jamhuuriyadu waxay noqotay mid madaxbanaan. Waqti dalka ka mid ah waxaa lagu daray Czech Republic, Croatia iyo Hungary, intaas waxaa sii dheer aad u adag in xiriir lala yeesho Turkiga, Faransiiska iyo dabcan Jarmalka. Caasimada dalka waa magaalada Vienna. Markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka Austria sida Jarmalka loogu qaybiyay 4 aag.
Casinos iyo Khamaarista ee Vienna
Liisanka ugu horreeya ee dhismaha casino waxaa la soo saaray 1922, aasaaskii ugu horreeyay ee khamaarka waxaa lagu daabacay Salzburg. Tan iyo markaas, biyo badan ayaa qulqulay, laakiin hal shay ayaa weli sidii hore ah - casino ku yaal Austria ayaa loo oggol yahay. Waa ururka ugu weyn ee "Casinos Austria", waxay ka shaqeysaa 12 casinos waxaana ku jira ururo kale iyadoo loo eegayo mabda'a haysashada.
Markaa shirkadda "Casinos Austria International" waxaa lagu yaqaanaa meel ka durugsan xudduudaha dalkooda: waxay laamo ku leedahay 15 dowladood oo ay hadda ku hoos jirto 57 casinos. Intaa waxaa sii dheer, shirkaddu waxay horumarisay qayb faa'iido badan leh oo ka mid ah ganacsiga khamaarka: maraakiibta leh casinos-ka. Tiradoodu waxay si xawli ah ugu soo dhowaaneysaa calaamadda 100.
Dabeecaddan dawladeed ee khamaarka waxay keenaysaa dakhliga weyn ee balaayiinta euro.
Casinos ugu caansan ee Austria
Bad Gastein - waa xaafad ku taal koonfurta Salzburg
Magaaladan waxaa ku yaal mid ka mid ah casinos-yada ugu raaxada badan oo keliya Austria, laakiin sidoo kale Yurub oo dhan. Waxay ku taal dhismaha Grand Hotel de l'Europe, oo la dhisay horraantii qarnigii XX. Badanaa waxay ku shaqeeyaan khamaar si buuxda u shaqeynaya laga bilaabo 19: 00, oo dhammaan kuwa doonaya inay soo booqdaan waa lagama maarmaan in fiiro gaar ah loo yeesho lambarka dharka - dharka isboortiga iyo gaagaaban halkan laguma soo dhaweynayo. Isaga waxaad u baahan tahay inaad haysato dukumeenti aqoonsi ah. Waxa ugu muhiimsan - joogitaanka sawiradaada, iyo da'da ka weyn 18 sano. Tigidhada gelitaanka waxay ku kacayaan 23 euro, waxaad ka heleysaa astaamo lagu sheegay Euro 25.
Magaaladaan, casino «Casino Salzburg» wuxuu ku yaal qasrigan Schloss Klessheim, oo lagu dhisay qaabka rococo ee maskaxda, taas lafteedu waa soo jiidasho. Meeshan kaliya maahan in muuqaalka la toogto. Gelitaanka casino ayaa la bixiyay, qiimaheeda waxay kuxirantahay waqtiga iyo dhacdooyinka ka dhaca qasriga. Waxay noqon kartaa ururada riwaayadaha masraxa ama heesaha.
Magaalada loo dalxiis tago ee Velden sidoo kale waxay caan ku tahay naadiyadeeda, oo dib loo dhisay 1950. Laakiin maadaama kuwa doonaya inay dabada ka qabtaan Fortune sanad walba ay isa soo tarayaan, dhismaha casino ayaa la ballaariyay. Dhismahan cusub, oo la furay 1989, wuxuu awoodaa inuu qaado 4,000 oo soo booqdayaal ah mana aha mid raaxo yar. Waxaa ku yaal makhaayad, bistro, bar, iyo barxad lagu ciyaaro ciyaarta oo ku taal harada weyn. Waa sax mid ka mid ah casinos-yada ugu caansan uguna casrisan Yurub.
Vienna Opera. Goobta: Vienna, Opernring, 2. Austria waxay ku faantaa hanad muusig - Mozart, sidaa darteed booqashada “Vienna Opera” waa qasab in lagu daro liiska soo jiidashada daawashada ee qasabka ah;
Guriga Hundertwasser. Goobta: Vienna, Untere Weissgerberstrasse, 13. Cinwaankan waxaad ka heli doontaa mid ka mid ah dhismayaasha ugu xad-dhaafka badan Austria.
Matxafka Sigmund Freud. Goobta: Vienna, Berggasse, 19. Hubso inaad booqato matxafka saynisyahanka caanka ah. Halkaas waxaa lagugu sheegi doonaa oo keliya nolosha laakiin sidoo kale dhaqanka maskaxda. Dhismaha cilmi nafsiga weyn wuxuu noolaa muddo ku dhow 47 sano.
Vienna Woods. Goobta: Vienna, Wienerwald. Maad ku daashay jidadka mashquulka badan ee Vienna, waxaad had iyo jeer ku nasan kartaa jardiinada quruxda badan ee magaalada.
Matxafka "Taariikhda Fanka". Cinwaanka: Burgring 5. Halkan aragtidaadu waxay ka muuqan doontaa sawir gacmeedyo asli ah oo ay sameeyeen sayidyahanno ay ka mid yihiin Titian, Raphael, Vermeer iyo qorayaal kale, iyo waliba farshaxanno iyo farshaxanno kala duwan.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Awstaria iyo Australiya
Dadku waa 8, 4 million qof, 90% ku hadalka Jarmalka;
Sababtoo ah iskumid ahaanta magacyo, badanaa waxay isku khaldeen Austria iyo Australia. Sidaa darteed, waa wax xusuus ah oo caan ah "Austria: ma jiraan kangaroos";
Waa waddanka kaliya ee doorashadu u ogolaatay muwaadiniinta in ay sanado 19, halkii ay 18;
Harada Gruner waxay qarisaa seerayaal dhab ah - xilliga qaboobaha oo keliya 1-2 mitir ayaa qoto dheer, laakiin ka dib daadadka moolka qoto dheer ayaa noqda 12 mitir;
In Austria, sida Germany, ee sauna, ragga iyo dumarka ku qubeystaan ​​qol isku mid ah;
In kabadan nus ka mid ah raggii reer Austria ayaa aad u cayilan;
Wadankan hooyo ma aha oo kaliya Mozart, laakiin sidoo kale Haydn, Schubert, Liszt, Strauss, Mahler, Bruckner.
0.1 Khamaarista online ee Austria
0.2 List of Top 10 Austria Sites Casino Online
2.1 Boggaga internetka ee khadka tooska ah wuxuu aqbalaa ciyaartoyda Austria
3 Khamaarista Australiya
3.0.1 Goobta Awstaria iyo asalka taariikheed ee kooban
3.1 Casinos iyo Khamaarista ee Vienna
3.1.1 Casinos ugu caansan ee Austria
3.1.1.1 Bad Gastein - waa xaafad ku taal koonfurta Salzburg
3.1.3 Soojiidashada Vienna
3.1.4 Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Awstaria iyo Australiya
3.1.5 Austria on map of Europe